အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း (၇၀) - အပိုင်း (၉) - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း (၇၀) - အပိုင်း (၉)
Posted by Language Republic on May 17, 2012 at 15:41 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၄၁။ မှတ်စုတွေအားလုံးလွှင့်ပစ်လိုက်ပြီး အသစ်ပြန်စနိုင်ပါတယ်။ တချို့လူတွေအတွက် စာမသင်ချင်တော့ဘဲ နောက်ဆုတ်သွားရတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကတော့ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပဲ ဖတ်ရသေးတဲ့ စာအုပ်တွေက အပုံလိုက်၊ ကျက်ရမယ့် Vocabulary စာရင်းကလည်း အရှည်ကြီးဖြစ်နေတာပါဘဲ။ အဲဒါတွေအကုန်လုံးကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပြီး အစကနေ အသစ်တဖန် ပြန်စမယ်ဆိုရင် စိတ်အားထက်သန်ပြီး စာပြန်ဖတ်ဖြစ် လာနိုင်ပါတယ်။
၄၂။ အိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေ၊ ရုံးကပစ္စည်းတွေမှာ post-it စာရွက်လေးတွေနဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေ ရေးပြီး ကပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် မြင်တွေ့အသုံးပြုနေတဲ့ အရာဝတ္ထုအမည် ဝေါဟာရတွေကို အလွယ်ဆုံး သင်ယူနည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အမည်တွေကို စာရွက်ကလေးတွေနဲ့ ရေးပြီး လိုက်ကပ်ထားမယ်ဆိုရင် အသုံးဝင်တဲ့ ဝေါဟာရတွေ တတ်မြောက်လာဖို့ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်နေ့တွေ၊ ရက်သတ္တပတ်တွေမှာ အဲဒီ Vocabulary တွေကို ဆက်ပြီး ကပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ စနစ်တကျ တတ်မြောက်ပြီးတဲ့အထိ Vocabulary ကို အလွယ်တကူပြန်နွှေးပြီး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၄၃။ ရုပ်ပုံမှာစာတမ်းထိုးပါ။ တကယ့်ပစ္စည်းတွေမှာ စာတမ်းမထိုးနိုင်ဘူးဆိုရင် ဒုတိယအကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ ရုံးခန်းလိုမျိုး နေ့စဉ်ဘ၀ တကယ်တမ်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ နေရာကို ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ပြီး Printer နဲ့ထုတ်၊ ပြီးရင် ပုံမှာပါတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေအားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လို စာတမ်းထိုးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘိဓာန်ရဲ့အကူအညီနဲ့ စာတမ်းထိုးပါ။ ဘူတာရုံလိုမျိုး နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းသွားရတဲ့ နေရာတွေကိုလည်း အလားတူ ဓာတ်ပုံရိုက်၊ Print ထုတ်၊ စာတမ်းထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒီမြင်ကွင်းကိုပဲ ထပ်ကာထပ်ကာ မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အရာဝတ္ထုတွေအတွက် ဝေါဟာရတွေကို အလွယ်တကူ တတ်မြောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄၄။ အင်္ဂလိပ်လိုနေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးပါ။ အင်္ဂလိပ်လို မကြာခဏပြောဖို့ အခွင့်အလမ်း မရသူတွေ၊ ဘာရေးရမလဲ စဉ်းစားလို့ မရသူတွေအတွက် နေ့စဉ်မှတ်တမ်း ရေးချင်အောင်၊ အင်္ဂလိပ်စကားကို အသုံးပြုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် တကယ်တမ်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ အကြောင်းကို ရေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အဘိဓာန်ရှာရတဲ့ ဝေါဟာရတွေဟာလည်း အသုံးဝင်ပြီး သင်ယူလို့ လွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၄၅။ အင်တာနက်မှာ Chat လုပ်ပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောဖို့ အခွင့်အလမ်း မရရှိသူတွေအတွက် အင်တာနက်မှာ Chat လုပ်ခြင်းဟာ စကားပြောတာနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ စဉ်းစားပြီး အလျင်အမြန် တုံ့ပြန်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် စကားအသုံးအနှုန်း တိုတောင်းပြီး ပြောစကားလိုပဲ အလွတ်သဘော သုံးနှုန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း (၇၀) -
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း (၇၀) - အပိုင်း (၇)
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်း (၇၀) - အပိုင်း (၈)
Permalink Reply by aungzawmin on May 17, 2012 at 16:20
အပိုင်း (၇) နဲ့ ( ၈ ) က တူတူ ပဲလား ခင်ဗျား..
Permalink Reply by Zaw Win on May 18, 2012 at 9:15
When we check the chapter 8 and 9, both are same.
Permalink Reply by Zaw Win on May 18, 2012 at 16:54
I would like to thank you very much for correction.
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on May 18, 2012 at 10:42
We have alerted the mistake to the member and the content has been changed. Thank you for pointing that out.
Permalink Reply by 1l9sjsmcmt6ic on May 18, 2012 at 15:16
Thank, so much, I want to chat you. What time do you free time. Where connect you?
Permalink Reply by Kay Thwe Zaw on June 1, 2012 at 23:07
Permalink Reply by Khine Hnin Si Lin on June 5, 2012 at 16:39
Permalink Reply by Win Win Than on September 2, 2012 at 9:01
Permalink Reply by ahdinn on November 25, 2014 at 9:44
Thanks you very much. I like that your posts so may i share your posts on my facebook.
Permalink Reply by htaylim on March 31, 2016 at 13:58